Home Wararka Labo dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay xaafado ka tirsan Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay dilal qaarkood loo geestay dad shacab ah, waxaana dilalkaasi geestay kooxo burcad ah oo dhac u geesanayay dadka ay dileen. Labo nin oo dhallinyaro ah ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay xaafado katirsan degmada Wardhiigley, waxaana goobta dilalka ka dhaceen ka baxsaday kooxihii hubeesnaa ee dilka fuliyay.
Dhallinyarada la dilay waxaa kamid ahaa Cabdinuur Cabdullaahi Warsame (Black) oo kamid ahaa dhallinyarada sida weyn looga yaqaanay Wardhiigley, waxaana ninkan kooxo burcad ah oo moobeel ka dhacayay ku hor dileen gurigiisa. Ciidamo katirsan booliiska ka howlgala saldhiga degmada Wardhiigley ayaa gaaray goobaha ay dilalka ka dhaceen, waxa ayna ciidamada halkaasi ka sameeyeen howlgalo aan lagu soo qaban burcadii dilalka geesatay.
Dilalka dhallinyaradn aan waxba galabsan loo geestay ayaa waxaa ka naxay dad badan, waxaana baraha bulshada laga dareemayaa tacsida dhallinyarada gaar ahaan Cabdinuur Black oo kamid ahaa dhallinyarada wax baratay. Magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya dilalka ay geesanayaan burcada hubeesan kuwaa oo adeegsada mootooyin nuuca bajaajta ah, waxa ayna burcadan rasaas huwiyaan ayna dilaan qofkii isku dhejiya moobeelada ay dhacayaan.
Previous articleKoronto la’aan baahsan oo ka jirta magaalada Xudur, ee Gobolka Bakool
Next articleUganda oo ciidamo cusub oo ka mid noqda AMISOM u soo direysa Soomaaliya